Blockchain News 25 Janoary 2018 - Blockchain News
Governemanta Indoneziana Bitcoin fianarana ny ilaina toy ny fampiasam-bola
Ny governemanta Indoneziana Bitcoin fandinihana ny fampiasana fitaovana toy ny fampiasam-bola, ny Trade ny hoavy Fanompoana Exchange maso Board (Bappebti) hoe.
"Nampiasa Bitcoin toy ny fandoavam-bola fitaovana voarara, Ahoana anefa no momba ny fampiasana azy io ho toy ny fampiasam-bola fitaovana? Moa dia namela izany na tsia?"Bappebti lohany Bachrul Chairi hoy tamin'ny Talata in Jakarta, araka ny tatitra avy kompas.com.
Lalàna No indonezianina. 7/2011 amin'ny vola hoy ny Rupiah no hany ofisialy raharaham-barotra sy ny fandoavam-bola fitaovana ao amin'ny firenena.
Bachrul hoy Bappebti dia mianatra ny mety ho fampiasana ny Bitcoin ho toy ny fampiasam-bola fitaovana. "Amin'ny alalan'ny fianarana, dia te-hahita raha Bitcoin azo ho raisina ho toy ny Hafanàm-po an-pananana," hoy izy.
Market fanaraha-maso sy ny fampandrosoana biraon'ny lohany amin'ny Bappebti Dharmayugo Hermansyah hoy ny fikambanana nahita hery anaty lehibe ao Bitcoin vokatra varotra.
manokana, Minisitry ny Vola Sri Mulyani Indrawati nilaza fa tsy misy fitsipika ao amin'ny firenena ny olom-pirenena voarara tsy mampiasa vola ao amin'ny cryptocurrency. "Izany dia niakatra ho any ny olona mba hampiasa Bitcoin toy ny fampiasam-bola fitaovana,"Hoy izy nanindry.
Voalohany Bitcoin fifanarahana mpitondra entana avy any Rosia vary ho any Torkia
Cryptocurrencies dia manao sakafo Mifindra tsikelikely any varotra entam-barotra.
Voalohany nanorim-ponenana tany entana fifanarahana Bitcoin Novonoina tamin'ny volana lasa teo ny sambo nitondra vary avy eo ambony shipper Rosia any Torkia, araka ny Praiminisitra Shipping Foundation, ny orinasa ao ambadiky ny raharaham-barotra.
Ny zato tany dia ampahany amin'ny mpanamory fitiliana ny Praiminisitra ny blockchain Shipping Foundation rafitra fandoavam-bola ho an'ny ampahany entana, hoy Lehiben'ny mpanatanteraka Mpiandraikitra Ivan Vikulov.
Ny masiaka natao tamintsika-monina ny teknolojia nomerika ho afaka avy hatrany fanodinana ny vola sy ny fiovam-po an ary avy tamin'ny cryptocurrencies, araka ny orinasa, fiaraha-miasa eo Gibraltar-monina Kôlejin'ny Renivohitra Ltd. ary ny sambo broker Interchart LLC. Ny vondrona dia mikasa ny hamorona ihany koa ny tenany nomerika vola.
Tale Jeneralin'ny banky lehibe indrindra Rosia: Cryptocurrencies tsy tokony ho voarara
Manam-pahefana Rosiana mpiasan'ny banky Herman Gref, lohan'i Sberbank, dia nanamafy ny toerany eo amin'ny mpanohitra ny fandraràna ny cryptocurrencies.
Rosiana manam-pahefana sy ny manam-pahefana ara-bola dia tokony ho fandeferana ny cryptocurrencies sy blockchain teknolojia, Masoivohom-baovao Rosiana TASS mitanisa Sberbank Tale Jeneralin'ny Herman Gref toy ny milaza. Ny mpiasan'ny banky lasa dingana iray lavidavitra kokoa, nanindry mafy fa cryptocurrencies dia mbola tsy azon'ny ary misy fitsipika tokony ho refesina sy heverina, tsy tohina.
hoy Gref “izany [crypotocurrencies] dia tsy tokony ho voarara, tahaka ny lehibe amin'ny fampandrosoana ny teknolojia vaovao, izay tsy mbola ho takarina.”
Tamin'ny tapaky ny volana 2016, tao anatin'ny fanompoana ny Rosiana ara-bola ny (tsy nahomby) miezaka mampiditra ny fandrarana bitcoin volavolan-dalàna izay heloka bevava bitcoin adopters, Gref ampahibemaso nilaza mihazona kely ny bitcoin sy manohitra ny volavolan-dalàna. Tamin'ny fotoana, Rosia bola fanompoana nanolo-kevitra am-ponja sazy niakatra ho any 7 taona for bitcoin adopters.
Brisbane Airport mba hanaiky Bitcoin
Brisbane Airport no marika ny tenany ho toy ny voalohany eran-nomerika namana vola seranam-piaramanidina.
Ny Aussie dia niasa tamin'ny seranam-piaramanidina maro mpaninjara sy ny TravelbyBit. Mpandeha ho ela ho afaka mampiasa ny cryptocurrency TravelbyBit rafitra fandoavam-bola, anisan'izany Bitcoin sy ny vola nomerika hafa, mba hiara-misakafo dia hividy amin'ny fivarotana maro samihafa manerana ny terminal roa.
Ny fiaraha-miasa Brisbane Airport manamafy ny tanjona ny raharaham-barotra eo an-toerana hanohana, hanatsarana ny mpandeha traikefa, ary lasa mpitarika ao amin'ny seranam-piaramanidina Hafanàm-po an fanavaozana toerana.
Avy amin'ny seranam-piaramanidina fitaterana ho lafo vidy Hotel zavatra ilaina, sy ny sakafo ary ny fialam-boly ao amin'ny toerana Brisbane ny herimpo Valley, Brisbane dia rebranded ny mponina toy ny 'Crypto Valley' maherin'ny 20 mpivarotra tao amin'ny faritra nomerika ankehitriny mandray vola fandoavam-bola.
Caleb Yeoh, Tale Jeneralin'ny TravelbyBit, hoe: "Isaky ny mandeha any ivelany tsy maintsy miatrika vola maro ary tsy fantatrao izay tahan'ny fifanakalozana ny banky no mamaly ny anao. Eto amin'ny TravelbyBit isika fampiroboroboana ny Bitcoin Travel hetsika. Hafanàm-po an vola ho an'izao tontolo izao-mandeha malalaka. Tena tsotra, soa aman-tsara ary tsy misy saram banky,"Mr hoy Yeoh.
Stock varotra Robinhood App ny hanomboka Bitcoin & Ethereum barotra
Customers in California, Massachusetts, Missouri, Montana sy New Hampshire dia ho afaka ny varotra sy ny ethereum bitcoin amin'ny alalan'ny fampiharana manomboka ny volana Febroary, Robinhood nanambara Alakamisy. Nandritra izay fotoana izay, rehetra izao dia afaka manara-maso mpanjifa vidin-javatra sy mandray fanairana ho an'ny 16 cryptocurrencies eo ny fampiharana.
Robinhood nanomboka tokony ho enin-taona lasa izay ho fomba ho an'ny mpanjifa, tanora ny ankamaroany mpamatsy vola, ny varotra boloky hazo amin'ny alalan'ny finday avo lenta ho maimaim-poana ny. Robinhood ihany koa dia manana Premium vola fanompoana, ary amin'ny Desambra nandefa safidy varotra. Ny orinasa fotoana izao dia manana mihoatra noho ny 3 tapitrisa mpampiasa, amin'ny 78 isan-jato latsaka ao amin'ny antsoina hoe taona arivo taona sokajy 18 ny 35 taona.
Fa cryptocurrency varotra, Robinhood dia tsy fampiasam-bola minimums na maximums, ary tsy misy fialana mametra. Ny start-up no mitantana ny ankamaroan'ny vola madinika ivelan'ny aterineto ny nomerika ao ilay antsoina hoe mangatsiaka fitehirizana. Ny fomba fanao manakana mpijirika tsy mangalatra ny vola madinika.
Coinbase fizahan-toetra farany dia manomboka Segwit
Coinbase manana announc ...
Cryptocurrency vaovao ...
Previous Post:Fandoavam-bola tsy mety mpandraharaha mivatra Bitcoin
Next Post:Fanafihana mitam-piadiana adidiko ny Canadian Crypto Exchange